Nyere Scout: Tinye Ọrụ Ndị Ahịa Scalable na saịtị gị | Martech Zone
Nyere Scout: Tinye Scalable Customer Service na saịtị gị
Satọde, Ọgọstụ 31, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Pụrụ iche: Jiri njikọ njikọ anyị iji nweta 30% Gbanyụọ ndenye aha ọnwa 3 maka Atụmatụ HelpScout.
Ọ bụ ezie na ndị isi na-ebu amụma na ụlọ ọrụ ọ bụla bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ugbu a, m ga-arụ ụka na ụlọ ọrụ ọ bụla na-achọkwa nnukwu ọrụ ndị ahịa yana nzaghachi. Ọ bụrụ na enwere otu okwu nwere ike igbochi mbọ ị na-agba maka mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ naghị azaghachi nke ọma maka arịrịọ ndị ahịa na-arịọ.
Nyere aka Scout na-enye ikpo okwu maka nkwado nke ndị ahịa na-enweghị mgbagwoju anya na njikwa nke ikpo okwu desktọọpụ zuru ezu. Enyemaka Scout bụ ndị ahịa na akpịrịkpa dị ka tebụl enyemaka ọ bụla, mana ahụmịhe ndị ahịa na-ahaziri dịka email nkịtị. Ikpo okwu nwere mmekorita nke na akwalite mmekorita ndi otu ma nye gi ohere idobe ndi otu gi n’otu akwukwo ma nwee obi uto ndi ahia. A na-etinyekwa akụkọ, na-etinye usoro nkwado nkwado na mkpịsị aka gị ka ị nwee ike soro arụmọrụ oge.
Ikekwe akụkụ kachasị ike nke Enyemaka Scout bụ ikike ịme arụmọrụ dị mgbagwoju anya maka nzaghachi onwe, ụzọ na ọrụ, yana ọrụ ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, Enyemaka Scout na-enye ụfọdụ mgbakwunye agbakwunyere dị ka nzacha nzaghachi akpaaka yana njikọta nke atọ na Firegba egbe, Capsule, Ngwa Google, Isi mmalite, Hipchat, Uzo ojoo, KISSmetrics, Klaviyo, Naanị, Olark, Snap Ọrụ, Ozi olu, Zapier na ọrụ 180 + ndị ọzọ. I nwekwara ike iru ngwa nke aka gi nke ha API na ogbi.
Tags: Firegba egbeCapsulengwa ngwa googleenyemaka ocheNyere aka ScoutIsi mmaliteHipchatUzo ojooUdogbeKlaviyoNaanịOlarkSnap Ọrụozi oluỌgba Weebụike
Sep 2, 2013 na 9: 30 AM
Obi dị gị ụtọ na ị na-ede edemede a gbasara Enyemaka Scout, Doug! Nwee ụbọchị dị egwu.
Ndị na-ewu kaadị akwụmụgwọ nyocha
Nov 30, 2013 na 1:01 AM
A na-eji ahịa n'ịntanetị ugbu a. Imirikiti ndị mmadụ na-azụ ihe n'ịntanetị
n’ihi na ndị mmadụ enweghị oge ịga ụlọ ahịa ịzụ ahịa na ịhọrọ ihe ha.
Marketingzụ ahịa n'ịntanetị nwere nnukwu ohere n'ọdịnihu.